Fikarohana WordPress & plugin sivana mahavariana - WPSOLR
Swiftype (tsy ho ela)
Addons (Plugins, theme, features)
fa HATE ny fikarohanao?
NATAO INDRINDRA IZAO
Ka dia nanokana ny fiainanay izahay hanosika ny fetran'ny fikarohana siansa hanamboarana ny fikarohana tsara indrindra fantatry ny olona: WPSOLR
Ataovy haingana sy haingana be ny fikarohanao
Fiteny 50+ namboarina mialoha
Fampisehoana tsy manam-paharoa amin'ny Elasticsearch, Solr, na Algolia
WooCommerce, bbPress, WPML, Polylang, ACF PRO, Toolset, Yoast ary maro hafa
Hamafiso ny plugin grids tianao indrindra: Elementor, Toolset Views
AI ho an'ny lahatsoratra sy sary
Demo 20+ ho an'ny lohahevitra lehibe rehetra
Orinasa kely sy orinasa iraisam-pirenena
Manampia fiasa an-jatony amin'ny fikarohana nataonao
Andraso, fantatrao ve fa misy haitao iraisam-pirenena telo manerantany amin'ny fikarohana?
Miaraka amin'ny plugin, azonao atao ny mampiasa azy rehetra. Tsy mila ho goavambe hahazoana fikarohana kilasy manerantany intsony.
Plugin fikarohana WooCommerce
Plugin fitadiavana WordPress
Plugin fitadiavana Algolia
Plugin fitadiavana Elasticsearch
Plugin fikarohana SolR
Plugin fikarohana Elementor
Fanamarinana WPSOLR "WPML-Ready"
Plugin fitadiavana polylang
plugin fitadiavana bbPress
Plugin fitadiavana Yoast
Ny plugin fitadiavana SEO rehetra ao anatin'ny iray
Plugin fikarohana ACF
Plugin fikarohana Google Vision
Plugin fitadiavana Google Natural Language
Plugin fitadiavana Amazon Rekognition
Plugin fitadiavana Amazon Comprehend
Plugin fitadiavana fitaovana
Fikarohana AI - Ho avy tsy ho ela
Fikarohana AI / Neural / Deep / Fikarohana semantisma
Fanontaniana sy valiny: Google Dialog Flow
AI miresaka: RASA
Transformers sy fampidirana volo: Bert, GPT-3, fastText
Fianarana lalindalina, aka Artigence Intelligence, aka Neural Networks, dia misy hatraiza hatraiza: manomboka amin'ny fandikan-teny mandeha ho azy, hatramin'ny famoronana lahatsoratra miaraka amin'ny GPT-3.
Saingy misy fiantraikany amin'ny fikarohana ihany koa io fironana io. Mipoitra ny taranaka vaovao fitehirizam-boky na serivisy antsoina hoe "Vector search". Saingy tsy hita ilay rohy tsy hita izay mahatonga azy ireo hampiasa betsaka: ny fahatsorana ary ny vidiny mirary.
WPSOLR dia mikasa ny ho ity rohy tsy hita ity, amin'ny alàlan'ny fitondrana ireo fisehoan-javatra tsy manam-paharoa amin'ny WordPress sy WooCommerce, toy ny nataony tamin'i Elasticsearch, Solr ary Algolia.
Ny sasany amin'ny fikarohana neural, ny fitoviana amin'ny neural, ny loharano misokatra na ny serivisy fitantanana, izay anaovan'ny WPSOLR fanadihadiana ankehitriny:
OpenAI Re-Ranking (vonona beta)
Maotera mifanitsy amin'ny Vertex
Ny sasany amin'ireo fiasa tianay ho entina amin'ny WordPress:
Modely farany: Ampiasao ny maodely miorina amin'ny transformer farany (oh: BERT, RoBERTa, MiniLM) hahazoana antoka kalitao azo antoka, fanomezan-toky momba ny kalitao ary fitadiavana antontan-taratasy.
Modular: safidy maro hifanaraka amin'ny trangam-pitaovanao sy ny fampiasao. Safidio ny angon-drakitra tianao, mpanova rakitra na rafitra maodely tianao.
Misokatra: 100% mifanaraka amin'ny hub modely HuggingFace. Fifaneraserana akaiky amin'ireo rafitra hafa (oh: Transformers, FARM, mpanova fehezanteny)
Azo refesina: mizana amin'ny antontan-taratasy an-tapitrisany amin'ny alàlan'ny retrievers, ny famokarana vonona miverina toy ny Elasticsearch / FAISS, Google latests algorithms ANN, ary ny data Vector avo lenta.
End-to-end: ny fitaovana rehetra amin'ny toerana iray: fanovana rakitra, fanadiovana, fisarahana, fiofanana, fanombanana, fanatsoahan-kevitra, fametahana marika sns.
Mahafinaritra ny developer: mora debug, manitatra ary manova.
Customizable: amboary ireo modely amin'ny fonenanao na ampiharo ny DocumentStore anao manokana.
Fianarana tsy tapaka: Angony ny angona fiofanana vaovao avy amin'ny fanamarihan'ny mpampiasa amin'ny famokarana ary hanatsara ny maodelinao
Misaotra anao nisoratra anarana
Raiso ny vaovao farany amin'ny fikarohana tsy ho ela WPSOLR's AI
Azafady azafady eto ambany ireo saha voamarika etsy ambany.
1, marina, 6, Lead Email, 2
1, marina, 1, Anarana voalohany, 2
1, marina, 1, anarana farany, 2
ny tranonkala *
1, marina, 9, ny tranonkalanao, 2
* Saha ilaina
Fanamarihana: Andraikitsika ny miaro ny fiainanao manokana ary manome toky izahay fa ho tsiambaratelo tanteraka ny angon-drakitrao.
Mahaiza foana amin'ny fotoana rehetra
Soso-kevitra eo noho eo
Fanodinana ireo fiteny voajanahary
Synonyma Dynamic avy any AI
Famerenana amin'ny laoniny Dynamic avy any AI
Sivana Widgets (slider, select2, color picker…)
Mikaroha zana-kazo Analytics
Ary satria mila data marina ny fikarohana dia efa nanao izahay connectors amin'ny plugins efa be mpampiasa.
Miasa milamina miaraka WooCommerce, bbPress, PRO ACF, Fitaovana amin'ny kitay, WPML, Polylang, Yoast SEO, sy ny maro hafa.
Afaka manangana iray ho anao koa izahay raha ilaina.
Alefaso ny marina kokoa ho an'ny WooCommerce sy plugins hafa
Lahatsarin'ireo sosokevitra typo Algolia
Azonao atao koa ny manandrana ny fampisehoana mivantana amin'ny alàlan'ny fandeferana amin'ny typo >>
Inona no atao hoe studio studio WPSOLR?
Studio WPSOLR dia ny ekipa ao ambadiky ny WPSOLR, plugin fitadiavantsika ho an'ny WordPress & WooCommerce.
Ny Studio dia manangona ny traikefa an-taonany maro ho an'ny fampandrosoana sy ny fanamafisana ny:
Mividiana amin'ny manam-pahaizana momba ny WordPress sy Search
Inona no ataon'ny studio studio WPSOLR ?
Ny plugin karina WPSOLR no mety indrindra fa mety indrindra sy avo indrindra amin'ny tsena. Izy io dia mifanaraka amin'ny ilain'ny mpanjifa.
Fa indraindray, mila mila tanana fanampiny ny olona iray mba hahatratrarana traikefa tonga lafatra.
Afaka manampy anao izahay:
indray ny tranokalanao rehetra hahatratra tsara kokoa SEO ary fiovam-pony
Mampiasà Elementor PRO, ACF PRO, ary somary lava amin'ny PHP / JS / CSS hananganana izay plugin mahazatra (CRM, faritra mpanjifa tsy miankina, mpikambana,…)
Manamboara UI fikarohana & Sivana vaovao
Manorata ary mampifandray Query mahazatra
Avereno jerena ny fampisehoana
Tune relevansi miaraka amin'ny laharana mahazatra
Mifandraisa aminay amin'ny asa fanaonao rehetra
Ampiasao ny raharaha - Ataovy manidina miaraka amin'ny lisitra 1 tapitrisa ny fikarohana MyListing
Ilay mpanjifa MyListing iray hafa dia tonga teto aminay satria tsy mahomby amin'ny lisitry ny an-tapitrisany ny tranonkalany.
Tsy ny fikarohana ihany no miadana fa ny pejy an-trano sy ny sit-ny Yoast koa.
Nanova ny add-on MyListing izahay, ary izao dia manidina ny tranokalan'ny mpanjifa, na dia misy lisitra iray tapitrisa aza.
Amboary ny MyListing sy ny lohahevitra hafa
Ampiasao ny raharaha - Hatsarao ny valin'ny fikarohana MyListing
Mpanjifa MyListing tonga tao amin'ny Studio anay satria tsy hitany ny lisitry ny marina: ny saha manokana izay tsy notadiavina mihitsy.
Tsy maintsy nanangana add-on feno izahay, satria ny myListing dia tsy mampiasa ny fikarohana fikarohana arisialy.
Ankehitriny, miaraka amin'ny fiankinan-doha vaovao, ny mpitsidika ny mpanjifantsika dia afaka mikaroka isaky ny torohay mifandray amin'ny lisitra.
Alefaso ny marina kokoa ho an'ny MyListing sy lohahevitra hafa
Ampiasao ny raharaha - Makà sary 4,000 avy amin'ny tranokala fivarotana frantsay
Ny mpanjifa dia naka sary 4,000 an'ny vokatra fivarotana enta-madinika.
Ny vokatra dia ampidirina (ampifanarahana) a Kezia II rindrambaiko fisoratana anarana, ao amin'ny magazay WooCommerce “Magasin Bio à La Teste de Buch".
Ampidirina ao amin'ny tranombokim-baovao avy eo ny sary.
Ahoana no ahafahan'ny olona mampifanaraka ireo sary amin'ny lohatenin'ny vokatra, ka mampakatra ny sary marina amin'ny galerin'ny sary?
By mamoaka ireo sary misy sary (OCR), mampiasa ny add-on WPSOLR ho an'ny Google Vision API.
Avy eo nataon'i fanoratana ireo magy ao amin'ny Elasticsearch miaraka amin'ny lahatsoratr'izy ireo OCR.
Aorian'izany, ny fanokafana ny tranombokim-baovao sy ny fitadiavana ny "Wine Bordeaux 2019" dia mamerina ireo sary mila ampiarahina amin'ilay vokatra mifandraika amin'izany.
Mikaroha sary miaraka amin'ny Art intelligence
Ampiasao ny raharaha - filaharana mahazatra
Tonga tao aminay ny mpanjifa iray satria tsikariny fa matetika ny fikarohana azy no mametraka ny laharana taloha amin'ny toerana voalohany. Izay tsy dia tsara loatra ho an'ny gazety.
Amin'ny lafiny iray, ny fiomanana amin'ny alàlan'ny daty dia mampiseho lahatsoratra tsy mitombina amin'ny toerana voalohany.
Noho izany, nanangana fiasa vaovao mifototra amin'ny alàlan'ny fahalavoana mihasimba Elasticsearch isika. Ity endri-javatra ity dia mamela ny valin'ny laharana araka ny fahitsiana sy ny datin'izy ireo. Na ny tsara kokoa aza dia azo antoka tsara ny fampitandremana / daty fanondroana amin'ny admin WPSOLR.
Ataovy mifanaraka amin'ny zavatra ilainao ny valin'ny fikarohana
© 2020 wpsolr.com. Zo rehetra voatokana.
Mizarà amin'ny reddit